Sheekada filimka Tholi Prema: inaba caadi ma ahan fariin jaceyl oo wacan ayuu la yimid Varun Tej – Filimside.net
Tholi Prema waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah aflaanta jaceylka, nolosha kuleejka iyo madax adeega dhalinta midka ugu wanaagsan oo ay dhawaanahan Telugu (Tollywood) sameeyaan.
Jilaayaasha filimkaan: Varun Tej iyo Raashi Khanna
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 16-daqiiqo
Qiimeynt Fariinta filimkan: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Fariintiisa: Jaceyl iyo shactiro isku jiro (Romantic Comedy)
Fariinta Filimka Tholi Prema Oo Kooban: Aaditya (Varun Tej) waa wiil dhalinyar oo aad u carro badan sidoo kalena go’aamada si deg deg ah u qaato, mana ka cabsado inuu ka hadlo waxa madaxiisa ka guuxayo ama uu doonayo inuu banaanka soo dhigo.
Laakiin gabadha wax la barato ee uu dadka ka doortay jaceylkana kala dhaxeeyo Varsha (Raashi Khanna) waa mid liddi ku ah hab dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa.
Varsha (Raashi Khanna) waa gabbar dagan sidoo kalena jecel inay xakameyso dareenkeeda halka ay ficil ku aar gudan laheyd waxay jeceshahay inay hadal ku aargudato oo wax walbo wada hadal lagu dhameeyo.
Hadaba labo qof oo bil cagsi ah isku ah dhaqan ahaan iyo dabci ahaan sidee nolosha mida fog u wadaagi karaan iyo nolosha dhow ayayba isku fahmi weesan yihiin dhan walbo!
Aaditya (Varun Tej) iyo Varsha (Raashi Khanna) caddow kale ma lahan oo aan ahayn inay nolosha isku fahmi karin, marka ay kuleejka waqti kooban isku qaataan ayay isku dhacayaan taasina waxay sababeysaa inay labo wado kala qaadaan.
Mudo lix sano kadib ayay dib u kulmayaan ayadoo qof walbo nolosha hadafyo kala duwan u hirgaleen kuwo kalena qabyo ka yihiin, hadaba marka ay dib u kulmaan suura gal ma tahay inay markaan wax walbo ku heshiiyaan si dhab ahna nolosha u wadaagaan?
Bandhiga Jilaayaash: Inkastoo filimkii Fidaa ee Blockbuster-ka weyn noqday Varun Tej hadal heynta filimkaan waxaa ka qaadatay Sai Pallav oo ka bandhig wacneyd, laakiin isagana markaan filimkan ayuu si wacan ugu kaabeeyay jiliin ahaan.
Varun Tej wuxuu helay mashruuc u cadaalad falay dadaalkiisa isagana si qurux badan ayuu u matalay doorkaan weliba wuu nasiib badan yahay waayihiisa fanka Telugu oo afar sano ah inuu helo filim sidaan u diyaarsan isagana su wacan uga baxsaday shaqadiisa.
Raashi Khanna iyadana door wacan ayay filimkan ka qaadatay kuna faani karto weliba iyada iyo Varun Tej si qurux badan ayay isku jaan qaadeen.
Fariinta Filimka Tholi Prema Maxaa Laga Yiri: Ma ahan sheeko cusub oo horey waa loo daawan jiray aflaanta kuleejka iyo jaceylka laakiin Director Venky Atluri iyo qoraayaashiisa qaabka ay sheekada u dhigeen, muusiga filimka oo wacan iyo dareenka qiirada badan ayaa ka dhigtay in filimkaan aan laga xiiso dhigeyn.
Gunaanad: Bandhiga Varun Tej, fariinta filimkaan oo wacan ayaa ka dhigtay Tholi Prema mid daawadayaasha ku raaxeesan doonaan sidoo kalena mashruucaan waa hubanti in guul wacan gaari doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Tholi Prema ee amaanta wacan lagala dul dhacay:
Waxaa Aqrisay 623